Imilomo yeLipstick yeeToni zoLusu eziPhakathi - Makeup Tips
Imilomo yeLipstick yeeToni zoLusu eziPhakathi
Ukufumana umbala ofanelekileyo kwithoni yolusu kuya kukonyusa imo yakho kwaye kuncede umbala wakho. Ukuba unolusu oluphakathi, awulunganga kwaye awumnyama kakhulu, kodwa uya kuhlala upholile, ushushu, okanye ungathathi hlangothi. Umthunzi olungileyo we-lipstick unokukhanyisa ubuso bakho kwaye uthintele ukuba ujongeke uhlanjiwe, kwaye zininzi izinto onokukhetha kuzo.
ususa njani ukungunda ezingubeni
Imilebe yomlomo yolusu oluphakathi kunye nama-Undertones apholileyo
Ukudala ukubonakala okuhle ngaphandle kokuzibandakanya kunokwenzeka. Xa ungathandabuzeki, bambelela kule mijelo yomlomo wesikhumba esiphakathi. Zintle kakhulu-kwaye zisebenza kakuhle ngeendawo ezipholileyo ezipholileyo.
Luhlaza-Bomvu. Wonke umntu othanda izithambiso ufuna ilipstick ebomvu ebomvu kwingqokelela yakhe. Eyona ndlela yokugungqa lo mthunzi unesibindi kukufikelela kwinto enesandi esiphantsi esiluhlaza. Zininzi imilebe eluhlaza ebomvu ukukhetha kwezi ntsuku, kodwa enye yezona zidumileyo zivela kwi-MAC. Umthunzi wabo weRuby Woo (malunga ne- $ 17) ulungele abathandi bobuhle obuhle beetoni eziphakathi.
IMAC Retro Matte Lipstick -Ruby Woo
Ipinki eqaqambileyo. Enye yezinto ezintle malunga nethoni yesikhumba esiphakathi yindlela ekulula ngayo ukuba uthinte umbala womlomo onesibindi! Iipinki eziqaqambileyo kunye nee-magentas zongeza kwangoko ukungcangcazela kwimbonakalo yakho. Umzekelo yi-Too ejongene noMelted Liquified Long Wear Lipstick emthunzini Ukunyibilika kweFuchsia (malunga needola ezili-18).
I-Berry-Toned Mauve. Ukongeza kwiipinki ezinamandla, i-berry shades nayo iyimfuneko. Bancoma ngokukhethekileyo nge-mauve. Ngoku ka Makeup.com , iithowuni zeberry ezinzulu kunye nee-mauves zezi njalo umbono olungileyo weethoni zesikhumba esiphakathi. Zama enye enje ngeLastwear Longwear Lipstick kuyo Imagnetic Mauve ukusuka kwi-Cover Girl (malunga ne-10 yeedola) kwiziphumo ezilungileyo.
Pinki-ze. Ukuba ufuna ukufumana amanqaku omlomo ohamba ze, ke umjelo weedunge ulungile. Umbala okhanyayo kakhulu unokukuhlamba. Endaweni yoko, jonga umthunzi obomvu opinki. Ithoni epinki yenza ukwahlula okucengacengayo phakathi kwemilebe nolusu. Khangela into efana ne-bareMinerals GEN NUDE Radiant Lipstick emthunzini Crush (ngaphantsi nje kwe- $ 20).
Amaminerali angenanto GEN NUDE ™ Radiant Lipstick kwi Crush
Ikofu Brown. Kukho imeko enye eshushu kunangaphambili: i-90s ephefumlelweyo yokwenza. Oko kuthetha ukuba imilebe yomdaka omdaka ikuyo yonke indawo, elungileyo ngeethoni zesikhumba esiphakathi. Ukujongwa kwendlela ejika iintloko, fikelela kumbala omdaka wekhofi njengeVice Lipstick yaseDolophini Ngo-1993 (malunga ne- $ 17).
Iipilisi zeLipstick ezifihliweyo
Eyona Brunette Makeup Jonga iMifanekiso
Iimpawu ezimangalisayo zoLusu oluFudumeleyo oluPhakathi
Ukwenza i-undertones yakho efudumeleyo ime ngaphandle kwazo zonke izizathu ezifanelekileyo, bambelela kwiitoni zomhlaba, imibala yequnube, kunye nokuma nzulu. Ezi thunzi zeethoni zolusu oluphakathi yiyo yonke into oyifunayo ukuze ujongeke imihla ngemihla.
Isikhokelo sokhathalelo lwehagu Guinea kubaqalayo
Bomvu-mthubi. Ngokungafaniyo nabantu abaneendawo ezipholileyo ezipholileyo, kungcono ukuba ubambelele kwilipstick ebomvu esekwe endaweni yento eluhlaza okwesibhakabhaka. Oku kuyakunika ulusu lwakho ukukhanya okuluhlaza, ngokwe InStyle . Ukugungqa obomvu ogqibeleleyo, khetha umthunzi ofana nombala kaBobbi Brown Lip Inethi (malunga ne- $ 29).
Ikorale. Ngaba ujonge ukongeza umbala omncinci ebomini bakho? Emva koko qiniseka ukuba uthabathe umlomo okrwada wekorale. Ayisiyomthunzi omkhulu wasehlotyeni kuphela, kodwa izalisa ulusu oluphakathi. Kukhangeleka kakhulu, sebenzisa i-lippie ene-orange-toned kunokuba ipinki. Into efana ne-NYX Butter Lipsticks kwi Izibane ze-Neon (ngaphezulu nje kwe- $ 5) iya kukwenza ugqame.
Peachy ehamba ze. Ukufezekisa inkangeleko yomlomo ohamba ze ogqibeleleyo, Umtsalane ucebisa Ukuncamathela kwilipstick ye-peach-eyayihamba ze. Ipesika iyasifudumeza isikhumba kwaye sikuthintele ekujongeni kuhlanjwe. Khetha umthunzi onje UMuneca Ukusuka kwilayini ye-Kat Von D engagungqiyo yeLipstick Lipstick (malunga ne- $ 20).
Nzulu Mauve. Ubunzulu bemibala emfusa kuhlala kungumbono olungileyo. Cinga i-burgundies etyebileyo, imibala yewayini, kunye nee-mauves. Ukwamkela isitayile se-vampier, chola into efana ne-Wet 'n Wild MegaSlicks Balm Stain Inenekazi kunye neVamp (ejikeleze i- $ 3) yesitayile esingenakuhoywa.
I-Wet n Wild MegaSlicks I-Balm Stain - Inenekazi kunye neVamp
U-Rich Brown. Imibala emnyama emdaka ijongeka intle kwabasetyhini abaneetoni ezifudumeleyo zolusu, kwaye zithandwa kakhulu ngalo mzuzu. Kukho imibala emininzi onokukhetha kuyo, kodwa enye yeendlela ezihlala ixesha elide yiColourPop's Ultra Matte Lip in Ukuhombisa (malunga ne- $ 6).
Ukuba awuyazi iGama lakho eliphantsi
Kukho amakhulu eemveliso zobuhle ezigubungele iishelufa. Ngelishwa, ayizizo zonke ezikunceda ukuba ufezekise ukubonakala okuthembekileyo. Kukho iziseko kunye nokufihla ngokukodwa ezenzelwe ukukhanya, okuphakathi kunye nemibala emnyama yesikhumba, kodwa uthini ngemilebe yomlomo? Ukuba awuyazi isandi sakho esiphantsi, kubalulekile ukuba uyiqwalasele ngaphambi kokuba uchithe umthunzi omtsha.
Kunokuba yinkohliso ukumisela ukuthambeka kolusu lwakho. Nangona kunjalo, ngokuka Uhlobo Caster Kukho iindlela ezimbalwa ezilula zokufumanisa ukuba loluphi udidi ongena kulo. (Njengohlobo lobucwebe obukhangeleka bhetele kuwe, umzekelo.) Ngokubanzi, ukuba uneetoni ezipholileyo, ulusu luya kuba neetoni ezipinki, ezibomvu, okanye eziluhlaza.
Umbala weenwele zakho kunye namehlo anokunceda ukukhomba izwi lakho eliphantsi. Abasetyhini abane-ash blonde, grey, brown emdaka, okanye abamnyama bahlala benombala opholileyo. Kuyafana nakubantu abanamehlo aluhlaza okanye aluhlaza.
Abafazi abaneetoni ezishushu kwelinye icala, bahlala benamthubi, igolide, okanye ithontsi eliphantsi. Elle Canada icebisa ukujonga kwimithambo yakho ukumisela ukuba awunayo na imibala yobushushu efudumeleyo. Ukuba baninzi kwicala eliluhlaza, kunokwenzeka ukuba ushushu.
Ukuba umbala weenwele zakho umdaka ngegolide, ubhedu, okanye izinto eziqaqambileyo ze-auburn, kukhuselekile ukuthi ushushu. Abantu abane-hazel okanye imibala yamehlo amnyama nabo kunokwenzeka ukuba bawele kolu luhlu.
Kulungile andikaze ndibenemibuzo kulutsha
Ukuba Unama-Undertones angathathi hlangothi
Kulabo abane ukungathathi hlangothi (okuthetha ukuba umncinci kuzo zombini), isibhakabhaka ngumda. Nawuphi na umthunzi okhankanywe kumacandelo apholileyo kwaye afudumeleyo angasentla aya kusebenza kakuhle nolusu lwakho oluphakathi. Konke kuza kukhetho lomntu!
Jonga kakuhle naphina apho uya khona
Ayinamsebenzi ukuba unomhla wesidlo sasemini esitshixo esisezantsi okanye umsitho okhethekileyo oza kuza. Ezi shades zemilebe ziqinisekile ukuba ziyawenza ulusu lwakho. Nokuba upholile, ushushu, okanye cala…. amava akho okuthenga alandelayo aya kuba yimpepho ngoku xa usazi ukuba zeziphi ezona zithunzi zihombisa ngesikhumba esiphakathi.
Iifashoni Tips Zabafazi I-Inshorensi Yempilo Isisa Slideshows Indoor Plant Care Ukukhetha Isifundo
ungalifumana njani ibala kwipolyester
izinto ezizisa ithamsanqa kunye nethamsanqa
amagama alungileyo kwiikati ezimnyama namhlophe
indlela yesiFrentshi yokumanga umfana
Utshintsha njani iikhilogram kwiiponti